Olom-pirenena vanona (10)
Ny anjara voatokana ho an'ny daholobe sy ny tsirairay ny amin'ny haren'ny tany dia hitady ny soa sy ny tsara. Efa hatramin'ny namoronana izao tontolo izao no nomena andraikitra ny olombelona mba hanankinana ny fitantanana ny tany sy ny hareny. Araka izay voalaza dia mba hanjaka ao amin'ny tany amin'ny alalan'ny vokatra ao aminy. Katesizy momba ny fifandraisan'ny mpiara-belona, iarahana amin'i P. Marcel Ranivomanalina.
Olom-pirenena vanona (9)
Ny fiaraha-monina dia fitambaran'ny olombelona mifandray ao anatin'ny rafitra voarindra, misy fitsipika fototra mampiray. Ny fiaraha-monina dia maharitra eo amin'ny fotoana, lova sy handraisana talenta. Ilaina fahafoizan-tena ny fiarovana ny fiaraha-monina mba hanana ny soa iombonana. Katesizy momba ny fifandraisan'ny mpiara-belona, iarahana amin'i P. Marcel Ranivomanalina.
Olom-pirenena vanona (8)
Mila ny fiainam-piaraha-monina ny olombelona, efa voajanahary izany. Eo amin'ny fiainam-piaraha-monina no hahitana ny fifampizarana amin'ny hafa, fifanampiana amin'ny asa ary ny fifanankalozan-kevitra. Ny sehatra ahafahana mampivelatra ny talenta dia ny fiaraha-monina. Katesizy momba ny fifandraisan'ny mpiara-belona, iarahana amin'i P. Marcel Ranivomanalina.
Olom-pirenena vanona (7)
Naseho ny : 29 jona 2022
Manana adidy ny olom-pirenena ka isan'ireny ny fijorona ho olon'afaka izany hoe miara-miasa amin'ny saina mahitsy. Ny olom-pirenena dia afaka mifanoro ary mifananatra araka ny hitsiny sy ny marina. Adidy miandry ny olom-pirenena ny fanalavirana ny fanararaotam-pahefana. Katesizy momba ny fifandraisan'ny mpiara-belona, iarahana amin'i P. Marcel Ranivomanalina.
Pejy 1 amin'ny 106